नेपाल पुनर्बीमाको आइपिओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
नेपाल पुनर्बीमाको आइपिओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन अधिकतम ५० कित्तासम्मको लागि आवदेन दिए पुग्ने
नेपाल लाइभ शुक्रबार, चैत ७, २०७६, १२:१५
काठमाडौं- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निष्काशन गरेको प्राथमिक सेयरमा मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि आजदेखि निष्काशन तथा बिक्री बन्द हुने भएको छ। आइपिओमा २.५७ गुणा आवेदन परिसकेको छ।
तीन दिनमा दुई लाख ९३ हजार २६० आवेदकले तीन करोड ८९ कित्ताको लागि आवदेन दिएका छन्। उक्त आइपिओमा पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवदेन परेको थियो। कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि एक करोड ५१ लाख कित्ता प्राथमिक सेयर निष्काशन गरेको छ। पहिलो दिनमै एक लाख २८ हजारले आवदेन दिएका छन्। कम्पनीले सामूहिक लगानी कोषका लागि ८ लाख कित्ता र कर्मचारीकहरुको लागि ७३ हजार ५०० कित्ता प्राथमिक सेयर निष्काशन भएको हो।
सर्वसाधारणले आस्वा सुविधा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन दिन सक्ने छन्। मेरो सेयरमा खाता हुनेहरुले अनलाइनबाट आफैं आवेदन दिन सक्ने धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले जनाएको छ।
आवेदकले न्युनतम १० कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सक्ने छन्। न्युनतम एक हजार रुपैयाँको आवदेन दिन पाइन्छ। प्राथमिक सेयर निष्काशन पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ। प्राथमिक सेयर निष्काशनसँगै नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व ४४.०३ प्रतिशत, बीमा तथा अन्य संस्थाहरुको ३९.९६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत कायम हुनेछ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी एक मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी हो। यसले नेपाली बीमा कम्पनी तथा विदेशी बीमा कम्पनीको पुनर्बीमाको दायित्व लिदै आएको छ। प्राथमिक सेयरका लागि गरिएको क्रेडिट रेटिङअनुसार सुरक्षित रेटिङ जनाउने इक्रा एनपि आइपिओ ग्रेड दुई प्राप्त गरेको छ। यो सबैभन्दा सुरक्षित रेटिङ हो।
हाल कम्पनी प्रतिसेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ छ। प्राथमिक सेयर निष्काशनपछि पनि कम्पनीले प्रतिसेयर आम्दानी सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
कति कित्तासम्मको लागि आवदेन दिने?
अहिलेसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै तीन लाख ४६ हजार जनाले आवेदन दिएका थिए। आज अन्तिम दिन एक लाखकै आवेदन पर्‍याे भने पनि सर्वसाधारणले न्युन्तम ३० कित्ता सेयर प्राप्त गर्न सक्ने छन्।
सर्वसाधारणले न्युन्तम ५० कित्तासम्मको लागि आवेदन दिएमा अधिकतम बाँडफाँडको सूचीमा पर्न सक्ने छन्।
संसदीय समितिको निर्देशन- दशगजा खाली गर्नेदेखि कालापानी र लिपुलेकका जनतालाई सुविधा बढाउनेसम्म
संविधानका कुन धारामा कस्तो संशोधन चाहन्छ जसपा?
विदेशी बैंकलाई ब्याज तिर्दा १० प्रतिशत करकट्टी गर्नुपर्ने विदेशी बैंकबाट नेपाली बैंकले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याज तिर्दा अब १० प्रतिशत करकट्टी गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाली बैंक तथा वित्ती... शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको टिप्पणी- आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
प्रेस युनियन सिन्धुपाल्चोकले गर्‍यो आफ्ना सबै सदस्यको कोरोना परीक्षण शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
सहुलियत र छुट मार्फत ६० अर्बको राहत प्रदान गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी नेपाल लाइभ
काभ्रे जिल्लाले पायो चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट, कुन स्थानीय निकायको कति? नेपाल लाइभ
असन चोकमा उभिए जस्तो बजेट : डा बाबुराम भट्टराई नेपाल लाइभ